Yakachipa yepamusoro mhando OEM jira simbi laser cheka zvikamu fekitori uye vanotengesa | Ouzhan
Iyo jira simbi maitiro inosanganisira laser kucheka, iyo inonyanya kushandisa yakakwira-inoshanda lasers kunyorera nekucheka zvinhu.
Yakakwira mhando sheetet simbi laser yekucheka zvikamu-chaiyo sheet simbi laser yekucheka kugadzirisa michini zvikamu
Sheet simbi zvigadzirwa zvine hunhu hwehuremu huremu, simba rakakwira, magetsi conduction, yakaderera mutengo, uye yakanaka kuwanda kugadzirwa kuita. Ivo vane akasiyana siyana ekushandisa. Kugadziriswa kwave kushandiswa zvakanyanya mumagetsi emagetsi, kutaurirana, indasitiri yemotokari, zvekurapa zvekushandisa uye mimwe minda. Semuenzaniso, mumakesi kesi, nharembozha, uye MP3, sheet sheet chikamu chakakosha. Uye zvakare, inoshandiswa mukugadzira zvigadzirwa zvekurapa, pamwe nemotokari nemotokari (marori) miviri, ndege fuselages nemapapiro, matafura ekurapa, kuvaka matenga (kuvaka) uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.
Zvakanakira Shanghai Ouzhan jira simbi Laser kucheka kushandisa michina zvikamu
● Laser yekucheka ine yakanyanya mwero yekuchinjika, yekumhanyisa yekucheka kumhanya, yakakwira kugadzirwa kushanda, uye ipfupi chigadzirwa chigadzirwa kutenderera. Kunyangwe zviri nyore kana zvakaoma zvikamu, zvinogona kushandiswa kukurumidza prototyping uye kucheka ne laser;
● Mutsara wekucheka wakamanikana, mhando yakanaka yekucheka, yakanyanya kuita otomatiki, kushanda nyore, kushomeka kwevashandi, uye pasina kusvibiswa;
● Inogona kuona kucheka otomatiki nesting uye nesting, iyo inovandudza zvinhu zvekushandisa mwero, hapana chishandiso chekupfeka, uye yakanaka zvinhu kuchinjika;
● Kudhura kwekugadzira mutengo uye zvakanaka hupfumi.
Yakasarudzika yendarira jira simbi laser yekucheka muchina zvikamu
Kushandisa Laser kucheka, Laser kuchera, Laser nomoto, Laser kurapwa, Laser chokuguma, Laser kupisa kurapwa, Laser nokukurumidza prototyping, Laser kuri uye Laser unhani zvose zvinogona kupatsanurwa muna Ouzhan.
Pashure: Custom jira simbi Laser kucheka zvikamu
Zvadaro: OEM jira simbi laser yekucheka zvikamu